?> lang="en-US"> विश्वकपका पाँच ठूला विवाद: अमेरिका र बेलायतसँग किन झुकेन रसिया ? – Read Gallery
June 8, 2018 July 15, 2018
काठमाडौँ: रूसमा हुन लागेको फिफा विश्वकप २०१८ सुरु हुन अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । विश्वकप सुरु हुनु अघि एउटा नयाँ विवाद सुरु भएको छ।
ताजा विवाद मेक्सिकोको फुटबल टिमलाई लिएर सुरु भएको हो । सञ्चारमाध्यमका अनुसार रूस उड्नुअघि मेक्सिको फुटबल टिमका कयौँ खेलाडीले यौनकर्मीसँग पार्टी गरेका छन् । तर पनि यो कुरालाई लिएर व्यवस्थापन टिमले खेलाडीलाई सफाइ दिएको छ । व्यवस्थापन टिमले खाली समयमा खेलाडीले मनोरञ्जन गर्न पाउने जनाएको छ ।
रूसलाई सन् २०१० मा विश्वकप आयोजना गर्न दिने घोषणा भएको थियो । त्यसपछि फुटबल विश्वकपलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । केही विवाद यस्ता पनि छन् जुन यसअघि कहिले पनि भएका थिएनन् । यिनमा कुकुरको संहारलाई लिएर रुसको तुलना नाजी हिटलरको जर्मनीसँग गर्नेसम्मका छन् ।
१. पहिलो विवाद: २० लाख सडक कुकुर मारियो
विश्वकप भन्दा पहिले ११ सहरमा २० लाख भुस्याहा कुकु र बिरालो मार्न आदेश दिएपछि रुसको आलोचना भएको छ । कुकुर बिरालो मार्नैका लागि रुसले करिब २० लाख करोडको सम्झौता गरेको छ । यी ११ सहर ती हुन् जहाँ विश्कप फुटबलका खेल हुँदैछन् ।
कुकुर र बिरालोलाई मार्ने टोलीको नाम ‘कैनी केजीबी’ राखिएको छ । यसभन्दा पहिले रूसकै सोचीमा भएको विन्‍टर ओलम्पिक भन्दा पहिले हजारौँ भुस्याहा कुकुरको ज्यान लिइएको थियो ।
रुसका यी ११ सहरमा कुकुरर बिरालोको ठुलो संख्या छ । पशु अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरुले सरकारले केबल आफ्नो छबि सुधार्ने नाममा कुकुर बिरालोको संहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । यहाँसम्मकि हजारौँ पंक्षीलाई पनि जिउँदै जलाइएको छ ।
यस विवादमा रूसका उप प्रधानमन्त्री विटाली मुट्कोले समेत बोल्नुपर्‍यो । उनले यस विवादमा पशुअधिकारवादीहरुसँग सम्बाद पनि गरेका थिए । उनले त्यसबेला पशुलाई नमारी कुनै सेल्टरमा बन्द गरिने बताएका थिए । तर उपप्रधानमन्त्रीको आश्वासन विपरित कुकुर बिराला मार्न थालिएको हो ।
२. दोस्रो विवाद: पैसा दिएर विश्वकप आयोजना
डिसेम्बर २०१० मा विश्वकप २०१८ का लागि रूसको नाम घोषणा गरियो । ब्रिटेन, नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगल जस्ता दावेदारबीच रूसको छनौटलाई आश्चर्य मानियो । यसक्रममा रुसमाथि फिफाका अधिकारीलाई पैसा दिएर आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप पनि लगाइयो ।
विश्वकप आयोजनाको टुंगो लाग्नुअघि सन् २००९ मा रूसले फुटबल स्टेडियम र प्रमुख शहरमा विशाल पुर्वाधार निर्माणका लागि १२ अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसबाट विश्वकपको आयोजक घोषणा हुनुअघि नै रुसले कसरी यस्तो लगानी गर्दैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि जब रूसको नाम घोषित गरियो तब यो आरोपलाई थप बल मिल्यो ।
आरोपको जाँचका लागि फिफाको अनुशासन कमिटिले जाँच समिति नै बनायो । माइकल गार्सियालाई जाँच कमिटीका प्रमु तोकियो । उता अमेरिकन महान्यायाधीवक्ताले पुरा मामिलाको आफ्नो तहमा जाँच गर्ने घोषणा गरे ।
यसबारे सन् २०१७ मा पुरै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । यो प्रतिवेदन खनेको पहाड निस्कियो मुसो जस्तै भयो । त्यसपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तत्कालीन फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरलाई हटाउनका लागि अमेरिकाले चालेको कदम भएको आरोप लगाए ।
३. तेस्रो विवाद: रूसी जासुसको ब्रिटेनमा हत्या
यसै वर्ष मार्च ४ तारिखमा रूसको जासुस एजेन्सीका पूर्व अधिकारी सर्जेई स्क्रिपल र उनकी छोरी यूलिया बेलायतको सेलिस्बरीमा मृत भेटिए । जाँचमा उनीहरुलाई विष दिएर हत्या गरेको कुरा सार्वजनिक भयो ।
सन् १९९० को दशकमा स्क्रिपलले डबल एजेन्ट (दोहोरो भूमिका) को काम गरेका थिए । बेलायतकव जासुस एजेन्सीका लागि काम गरेको आरोपमा उनलाई रूसमा गिरफ्तार गरिएको थियो । त्यसपछि उनी बेलायतमा बस्दै आएका थिए ।
सर्जेईको हत्यालाई ब्रिटिश सरकारले धेरै गम्भीरतासँग लिएर यसका लागि रूसलाई जिम्मेवार मान्यो। यसले दुवै देशको सम्बन्ध बिग्रियो । ब्रिटेनका विदेश मन्त्री बोरिस जोनसनले त रूसको तुलना नाजी जर्मनीसँग तुलना गरे । यसमा रुसले पनि कडा प्रतिक्रिया दियो । त्यो बेला ब्रिटेनले रुसमा हुने विश्वकप बहिष्कार गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठ्यो ।
कसरी भयो समाधान
बेलायतको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबल हो । यस्तोमा सरकारले ब्रिटिश फुटबल टिमलाई रुस पठाउने घोषणा त गर्‍यो तर उसले उद्घाटनदेखि समापनसम्म कुनै पनि कार्यक्रममा आफ्ना मन्त्री भाग नलिने पनि उद्घोष गर्‍यो ।
बेलायतको राजपरिवारले पनि रुसमा हुने फिफा विश्वकप बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो । फिफा विश्वकपको इतिहासमै पहिलो पटक कुनै राजपरिवारले यस्तो कदम चालेको यो पहिलो पटक हो ।
४. चौथो विवाद: डोपिङ
सन् २०१४ मा जर्मनीको प्रसारण संस्था आएरडी एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै रूसमा सन् २०११ मै सरकारको सहयोगमै डोपिङ्ग गरिएको जनायो ।
सन् २०१५ मा विश्व एन्टी डोपिङ्ग एजेन्सी (वाडा) ले आफ्नो रिपोर्टमा रूसको आलोचना गरेको थियो । नोभेम्बर २०१५ मा इन्टरनेशनल एसोसिएशन अफ एथलिट्स फेडरेशन्सले रूसका कयौँ खेलाडीलाई एथलिट्स कार्यक्रममा भाग लिन नदिन आजीवन प्रतिबन्ध लगायो ।
के भयो विवाद?
डोपिङ्ग विवादपछि वाडाले रिचर्ड म्याकलारेनको अगुवाईमा जाँच कमिटी बनायो। यस जाँच कमिटीले सन् २०११ देखि सन् २०१५ को बीचमा रुसका करिब १ सय खेलाडीलाई औषधि दिइएको जनायो ।
यीनमा ३३ फुटबलर पनि सामेल थिए । यस विवादपछि रुसको फिफा विश्वकप गर्ने क्षमतामा कयौँ प्रश्न उठाइयो । बेलायत र स्वीट्जरल्यान्डले रुसबाट विश्वकप आयोजकको भूमिका खोस्ने प्रयास पनि गरे
५. पाँचौँ विवाद : क्रिमियामा कब्जा
सन् २०१४ मा रूसले क्रिमियालाई युक्रेनबाट अलग गराएर आफ्नो देशमा गाभ्यो । यसलाई लिएर बेलायत र अमेरिकाले रुसको तुलना हिटलरको नाजी जर्मनीसँग गरे ।
बेलायत र अमेरिकी सांसदहरुले फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरलाई पत्रर लेखेर रुसबाट फिफा विश्वकप आयोजकको अधिकार खोस्न माग गरेका थिए । तर ब्लाटरले यस मागलाई खारेज गरिदिए । ब्लाटरले आयोजनाको जिम्मा दिइसकेकाले अब पछि हट्न नसकिने बताएका थिए ।
June 15, 2018 readgallery 0
August 11, 2018 readgallery 0
June 9, 2018 readgallery 0
Download Gmessenger App
A terrible fire on the bus
December 15, 2018 readgallery 0
June 8, 2018 readgallery 0
Read Gallery Pvt.Ltd chabahil
E-mail : info@readgallery.com
Phone : +9779880306668
Copyright © 2018 Read Gallery.